Iyo inotevera yekuvandudza yeTesla inogona kuwedzera Apple Music | IPhone nhau
Iyo inotevera Tesla yekuvandudza inogona kuwedzera Apple Music
Pakupera kwegore, zvakawanda zviri kutaurwa pamusoro peinogona kuitika Apple smart mota uye kusvika kwayo pamusika. Majee padiviZvinotaridza sekunge iyo Cupertino femu iri kufarira kupinda mumusika mumakore mashoma uye zano rinogombedzera randinoverenga pachezvangu ndere kuisirwa masevhisi mumota dzinozvimiririra, chimwe chinhu chichauya nekukurumidza kwete kupfuura uye uye zvinochinja mashandisiro atinoita mukati memota kana tichifamba kubva kune imwe nzvimbo tichienda pane imwe tisina kubata vhiri.
Ichi ndicho chinhu chinozopedzisira chauya asi kunyange zvikasaitika zvinoita sekuti Tesla, mumwe weavo vanogona kuve mukwikwidzi wakanangana - nemakore ekubatsira muindasitiri yemotokari pamusoro peApple - anga ave kuda kuwedzera iyo Apple Music sevhisi natively mu mota dzayo. Parizvino vese vashandisi veTesla vanongova neSpotify sevhisi iripo, ndinofungawo kuti ndinorangarira kuti vakapa gore rebasa pakutenga mota, izvozvi Zvinotaridza kuti Tesla ichawedzerawo Apple mimhanzi sevhisi.
Zvinoita sekunge mamwe masosi enhau ari kuuya nekukurumidza. Kunyangwe haisati yavepo nazvino.
Iyo icon muUI haina kunaka, asi iyo chaiyo pane yatove nevanhu. pic.twitter.com/dmavYUvuh7
- green (@greentheonly) Zvita
Kusvika ikozvino iwo chete 100% emagetsi anowedzera Apple Music mumotokari dzavo ndiyo Porsche Taycan, zvinokwanisika kuti iyo Tesla ichawedzera mune inotevera software vhezheni sezvakaratidzwa nemushandisi Green uye inoteedzera inozivikanwa webhu. MacRumors. Uku kungori mukana wekusasimbiswa zviri pamutemo naTesla, ndoda Apple, saka zvichave zvakakodzera kutevedzera runyerekupe zvakanyanya kuti uone kana zvichizoguma zvasimbiswa kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Iyo inotevera Tesla yekuvandudza inogona kuwedzera Apple Music
Nhare pfumbamwe pagumi dzakashandiswa muUS pazuva reKisimusi dzaive iPhones
Mushure mekuvandudzwa kwekupedzisira, isu tinogona ikozvino kushandisa HomePod Mini yakabatana nebhatiri rekunze